Senator Ilyaas “Baarlamaanka go’aan ayuu ka qaadan doonaa diyaaradii lagu soo riday Bardaale” – Kalfadhi
Senator Ilyaas “Baarlamaanka go’aan ayuu ka qaadan doonaa diyaaradii lagu soo riday Bardaale”
Senator Ilyaas Cali Xasan oo ka mid ah Xildhibaanada Aqalka Sare oo ka hadlayay diyaaradii dhawaan ku bur-burtay degmada Bardaale, ayaa sheegay in Baarlamaanka iyo Shacabka Soomaaliyeed ay qaadi doonaan go’aanno sharci ah.
Diyaaradii xamuulka ahayd ee laga lahaa dalka Kenya ee Isniintii ku burburtay degmada Bardaale ayaa waxaa imika la xaqiijiyay in ciidamada Itoobiya ay soo rideen.
Ciidamada Itoobiya ee diyaaradda soo riday ayaa la sheegay in aysan qeyb ka ahayn ciidamada nabad ilaalinat ee Midowga Afrika ee Amisom.
AMISOM, ayaa sheegay in diyaaradani markii ay ku soo hobatay garoonka ay sameysay weec-weecad aan lagu aqoon diyaaradaha taasi oo keentay in cidamada ay toogtaan iyaga oo ka shakiyay in howlgal is-miidaamin ah ay u socoto.
Amisom ayaa intaa ku dartay in uu jiray xiriir la’aan ka dhaxeysay ciidamadii goobtaasi ku sugnaa iyo diyaaradda taasi oo la xiriirta hanaanka ammaanka ee maareynta duulimaadyada.
Mudane Ilyaas, oo kamid ah xildhibaannadda mucaaradka ah, ayaa sidoo kale sheegay in soo gellitaanka ciidanka Ethiopia ee aan qeybta ka aheyn AMISOM ay si cad uga soo horjeedaa sharafta iyo madaxa banaanida dhulka Soomaaliyeed.
“Madaxweyne Farmajo, hada waan fahaney waxa adiga iyo Abiy Ahmed idinka dhaxeeyo aad Baarlamaanka iyo ummada Soomaaliyeed aad ka qarineysey inaad usharaxdo laakiin Ilaah ayaa banaanka keeney ceebtaada. Baarlamaanka iyo Shacabka Soomaaliyeed na waxay qaadi doonaan goaano sharci oo kadhan ah ku xad gudubka madax banaanida dhulka iyo dhiiga Berdaale kudul daadisey”, ayuu yiri.
Guddoomiye Abshir Bukhaari oo sheegay in si dhab ah looga dhabeeyo metelaada haweenka ee Doorashooyinka
Sheekh Shariif “Madaxda dowladda waa in ay caddeyaan sifaha ay ciidanka Itoobiya kusoo galeen dalka, kuna joogaan”